Ny ho avy dia izao: imperative pedagogical for fanabeazana fandriampahalemana - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Ny ho avy dia izao: imperative pedagogical ho an'ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana
Aogositra 27, 2020 Toetoetra 0
Nosoratan'i Tony Jenkins, PhD *
Fampidiran'ny editor. ao amin'io Fifandraisana Corona, Tony Jenkins dia nanamarika fa ny COVID-19 dia manambara ny filàna maika maika ho an'ireo mpanabe fandriampahalemana mba hanome lanja bebe kokoa ny pedagogical amin'ny fahitana, famolavolana, fandrindrana ary fananganana ho avy tiany.
Fanamarihana nalefa tamin'ny 4th Fifanakalozan-kevitra iraisam-pirenena - "Fampianarana momba ny fandriam-pahalemana: fananganana ho avy ara-drariny sy milamina," natolotr'i Gandhi Smriti & Darshan Samiti (Ivotoerana iraisam-pirenena momba ny fandalinana Gandhian sy ny fikarohana momba ny fandriam-pahalemana, New Delhi) tamin'ny 13 aogositra 2020.
Rehefa nanandrana hijery ny lohahevitra amin'ity fifanakalozan-kevitra ity i Prof. Vidya Jain dia nanintona anay ny hevitra hifandray amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana sy ny valanaretina. Mazava ho azy fa zava-dehibe ho antsika ny mandinika ny anjara andraikitra sy ny mety ho fanentanana amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana amin'ny famahana ireo tsy fahamarinana marimaritra iraisana, ary ny sakana ara-tsosialy, ara-politika ary ara-toekarena ho an'ny fandriam-pahalemana nasehon'ny COVID-19. Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy atao ny mijery ambany ambany. Ny coronavirus, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia mampiharihary tsotra izao izay efa nisy. Ireo mpikaroka momba ny fandriam-pahalemana dia nanazava nandritra ny am-polony taona maro ny herisetra ara-drafitry ny neoliberalism izay mamela ireo marefo indrindra amin'ny tarany. Ny voka-dratsin'ny viriosy tamin'ny olona marefo dia vinavinaina mialoha. Ankehitriny, mazava ho azy, ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia tsy maintsy manohy mandray an'io akanjo famotopotorana io. Tokony hamotopototra ireo rafitry ny hery sy ireo fomba fijery an'izao tontolo izao izay nitarihana antsika tany amin'ny toerana misy antsika ankehitriny isika. Mampianatra isika fa fantatsika fa ny fanamorana ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia ilaina amin'ny fanazavana ny lamina sy ny rafitry ny herisetra sy ny tsy fahamarinana. Ankoatr'izay, ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana mitsikera dia singa iray lehibe amin'ny fizotran'ny fianarana amin'ny fomba rehetra ilaina amin'ny fambolena fahatsiarovan-tena - ny fahatongavana ho "mifoha" - ary manohitra ny fiheverantsika an'izao tontolo izao ny amin'ny tokony hatao sy ny tokony hisy.
Ao anatin'ny tetik'asa lehibe, raha ny amin'ny fampiharana ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia mandeha tsara isika. Gaga be aho nahita ireo voambolana toy ny herisetra ara-drafitra sy ny fanavakavaham-bolon-koditra noraisin'ny loharanom-baovao mahazatra tamin'ny fanadihadian'izy ireo ny COVID-19 sy ny fitroarana momba ny herisetra ataon'ny polisy amin'ireo mainty hoditra any Etazonia. Heveriko fa ny fahombiazan'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia nohatsarain'ny zava-misy fa ny fampianarana ara-dalàna dia mandeha tsara amin'ny fampivelarana ny sasany amin'ireo fahaiza-manaony mifototra amin'izany - indrindra ny fampiroboroboana ny fisainana an-tsokosoko, ary ny fiheverana mitsikera kely kokoa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana mitsikera dia nohamafisin'ny zava-misy fa izy io dia nalaina avy amin'ny endrika pedagogical tsara izay nantitranterina tamin'ny fampianarana nentin-drazana. Ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana mitsikera dia tsy voatery mitaky fampidirana ireo mpianatra amin'ny endrika fisainana sy fianarana vaovao tanteraka.
Mazava ho azy, misy fampandrenesana lehibe amin'ity famakafakana ity. Fisainana mitsikera, ao anatin'ireo taompolo voalohan'ny taona 21st taonjato, vanim-potoana izay nofaritan'ny mpiara-miasa amiko Kevin Kester (2020) ho vanim-potoana taorian'ny fahamarinana, dia nifidy tanteraka. Nanjary fotaka ny "fahamarinana". Raha tokony hanadihady lalina sy handinika loharano sy fomba fijery marobe momba ny olana iray dia maro no mitady tsotra fotsiny ny sombin-kevitra - na omena lahatsoratra amin'ny alàlan'ny algorithma media sosialy - izay manamafy ny fitongilanana teo amin'izao tontolo izao. Manampy trotraka an'ity olana ity koa ireo olona ara-politika sasany izay mandainga tsy amin'ahiahy toy ny paikady iniana hamolavolana fandaharam-potoana politika. Fantatr'izy ireo fa ny fahazoana ny lainga alohan'ny fahamarinana dia midika fa mifehy ny fandaharam-potoana izy ireo; fa ny fametrahana ny marina dia ho sarotra kokoa noho ny fanafoanana ny lainga. Miaraka amin'ny fahafantarana ny vanim-potoana taorian'ny fahamarinana iainantsika dia mila mampivelatra bebe kokoa ny fahafahan'ny mpianatra mieritreritra fitsikerana isika - mba hihaika amin'ny fiheverana an'izao tontolo izao - hihoatra ny fanambarana “Mino aho” - hampiorina ny hevitsika amin'ny fikarohana - ary hirotsaka ireo mpiara-mianatra aminay amin'ny fifampiresahana malalaka. Na dia irinay aza ny hananan'ny mpianatsika faharesen-dahatra amin'ny zavatra inoan'izy ireo dia tsy maintsy ampianarinay ao aminy ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fisokafana hatrany amin'ny fiovana amin'ny alàlan'ny fandinihana sy ny fihantsiana ny zavatra inoany momba an'izao tontolo izao sy ny eritreritr'izy ireo.
Ny sakana lehibe iray hafa horesahina dia ny fanabeazam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana manadihady ireo rafitra sy fototra ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-politika izay tadiavin'ny sekoly ara-dalàna hampaharitra sy hamerina - ireo fototra izay fehezin'ny politika napetraky ny sangany ara-toekarena sy sosialy. Tompon'andraikitra maro amin'ny governemanta no maniry hamerina ny zavatra "hiverina amin'ny laoniny" haingana araka izay tratra. Betsaka ny olona - indrindra ireo izay mora tohina - no mijaly noho ny faneren'ny baiko mandanjalanja momba ny fahasalamam-bahoaka. Mampihoron-koditra ny tolotra ara-toekarena, sosialy ary ara-tsaina. Fa ny "miverina amin'ny ara-dalàna" ve dia hisy fahasamihafana ho an'ireo izay efa nijaly tamin'ny toe-javatra "mahazatra" teo aloha?
Fanontaniana iray mipoitra - ary fanontaniana iray izay heveriko fa mbola tsy voadinika ara-pahalalana ara-pedagogika - no tokony ho "Ara-dalàna vaovao," sa hanao ahoana izao tontolo izao irintsika hiverina rehefa mihena ny areti-mandringana?
Ity dia lohahevitra malaza amin'ny “Fifandraisana Corona, ”Andian-dahatsoratra izay novoarako ho an'ny Global Campaign for Peace Education izay manontany ny amin'ny fomba hananganana ny“new normal. ” Tamin'ny volana Mey dia navoakanay ny Manifesto ho an'ny mahazatra vaovao, fampielezan-kevitra natolotry ny American Latin Council for Peace Research (CLAIP), izay nanampy anay hampiorina ity mason-kevitra manan-danja amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana ity. Nanamarika ny CLAIP fa "ny viriosy dia tsy mamono (betsaka) toy ny fomba fanao tsy marina izay ezahantsika hiverina." Na ny marimarina kokoa, ilay "virus dia famantarana ny fomban'ny aretina izay niainantsika."
The Manifesto ho an'ny mahazatra vaovao manolotra mihoatra ny fitsikerana fotsiny: mametraka fahitana etika sy ara-dalàna ihany koa momba ny fanao vaovao hiezahantsika hananana. Ny tena zava-dehibe dia manazava ny sasany amin'ireo fisainana mety ilaina amin'ny fianarana ny lalantsika mankany amin'ny fahalalahana izany ary mba hialana amin'ny eritreritra nanjanaka sy ny fomba fijerin'izao tontolo izao ny fanekena ny herisetra ara-drafitra namboarin'ny fomba mahazatra teo aloha.
Mijery ny Manifesto ho an'ny mahazatra vaovao ho toy ny drafitra mety hianarana mety hikolokoloana fahitana cosmopolitan ny fandriam-pahalemana sy ny fanabeazana ho olom-pirenena manerantany. Ny sasany amin'ireo fanontaniana atolotray dia manampy antsika handinika rafitra ara-etika ho an'ny fari-piainana tokony hananantsika fatratra, iza no tokony hankafy azy io, ary ahoana no fomba hanatanterahantsika azy.
Zavatra iray ny Manifesto dia manazava mazava tsara fa ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia mila manasongadina bebe kokoa ny ho avy - manokana kokoa, ny fahitana, ny famolavolana, ny fandaminana ary ny fananganana ho avy tian'izy ireo. Ny ankamaroan'ny fianarantsika dia manasongadina ny lasa. Mijery aoriana, fa tsy mijery lavitra. Dinihinay tsara ny azo refesina sy empirika, izay hitanay, inona ary nisy - saingy tsy dia niraharaha izay mety sy tokony hisy isika.
Ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia mila mitondra fanamafisana bebe kokoa amin'ny ho avy - manokana kokoa, amin'ny fahitana, famolavolana, drafitra ary fananganana ho avy tiany.
Ao anatin'ny tontolo iray izay ananan'ny realisme politika mihazona mafy ny fanjakan'ny fiarahamonina, ny eritreritra utopiana dia hesorina ho nofinofy. Na izany aza, ny fahitana utopiana dia nitana andraikitra lehibe hatrany amin'ny fampiroboroboana ny fanovana ara-tsosialy sy politika. Elise Boulding, mpikaroka malaza sy mpanabe momba ny fandriam-pahalemana dia niresaka ny fomba anaovan'ny sary utopiana anjara asa roa: 1) maneso sy manakiana ny fiaraha-monina. ary 2) mamaritra ny fomba faniriana kokoa handaminana ny raharahan'olombelona (Boulding, 2000).
Betty Reardon (2009) dia mitondra ny lanjan'ny sary utopiana amin'ny fotokevitra mitovy amin'izany:
"Utopia dia hevitra bevohoka, noforonina tao an-tsaina ho toy ny mety ahafahantsika miezaka, ary amin'ny fiezahana hianatra ny fomba hahatanteraka ilay hevitra, hahatonga azy io ho tena izy. Raha tsy misy ny kibo, ny fiainana vaovao, amin'ny fiarahamonin'olombelona toy ny an'ny olombelona, ​​dia tsy afaka ny ho tonga zava-misy. Utopia dia fotokevitra iray, ny hevitra germinal izay ahafahan'ny fiainana vaovao ao anaty lamina ara-tsosialy vaovao mipoitra ho tanjona politika azo tanterahina, teraka tao anatin'ny dinganà politika sy fianarana mety ho lasa lamina sosialy voaova; angamba ilay nantsointsika hoe kolontsaina ho fandriampahalemana, zava-misy eran-tany vaovao. Tsy eo ny foto-kevitra germinal, kely ny vintana ho an'ny tontolo tsara kokoa hiova avy amin'ny mety ho zava-misy. "
Avelao aho hamerina an'io andalana farany io araka ny eritreritro fa misy ampahany lehibe amin'ny fanamby ho antsika:
"Tsy eo ny foto-kevitra germinal, kely ny vintana ho an'ny tontolo tsara kokoa hiova avy amin'ny mety ho zava-misy. "
Ka noho ny fotoana kely sisa tajanako dia tena iriko ny manararaotra sy manararaotra amin'ny fomba ahafahan'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana manetsika antsika amin'ny làlan'ity ho avy ity.
Andao atomboka amin'ny famoahana olana ara-tsaina. Ireo sary izay hazonintsika matetika amin'ny ho avy dia miorim-paka amin'ny zavatra niainantsika amin'izao tontolo izao ankehitriny sy amin'ny fandikana ny lasa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fahitantsika ny ho avin'ny ho avy dia matetika vinavinan'ny laharana, faminaniana manatanteraka tena. Izay pessimism rehetra tazonintsika amin'izao fotoana izao, izay miorim-paka amin'ny traikefa tena nisy teo amin'ny tantara, dia mitarika antsika hanangana ho avy "azo inoana", izay fitohizan'ny làlana taloha.
Ity fisainana ity dia azo raisina ary miorina amin'ny eritreritsika amin'ny alàlan'ny fahamaroan'ny tantara sy ny haino aman-jery dystopiana mikendry tanora tanora. Aza diso hevitra aho fa tiako ny tantara na horonantsary dystopiana tsara, manome fampitandremana momba izay ho avy io raha tsy miova lalana isika. Na izany aza, ny fampahalalam-baovao dystopiana dia tsy manampy antsika amin'ny fanovana ny eritreritsika momba ny ho avy avy amin'ny "mety" (izay azo inoana fa miorina amin'ny lalantsika ankehitriny) - mankany amin'ny "tiana", ny ho avy marina izay tena irintsika tokoa. Rehefa mitarika atrikasa amin'ny ho avy miaraka amin'ny mpianatra aho - na olon-dehibe - io fandrika fisainana io dia miseho ho sakana lehibe. Rehefa asaina misaintsaina ny fampiharana iray izay nangatahana ny mpianatra hieritreritra sy hamaritra tontolo ho avy tiany kokoa, ny valiny iraisan'ny besinimaro dia ny hoe “tena sarotra izany!” na “Tsy azoko natao ny nijanona tsy nieritreritra izay heveriko fa hitranga” na hoe “mahatsiaro tena ho tsy azo tanterahina” fotsiny ny famoahana sary utopiana kokoa momba ny ho avy.
Zava-dehibe ho antsika ny mahatakatra fa ny olombelona dia manangana ny zava-misy ao an-tsainy alohan'ny hanaovan'izy ireo izany ivelany, ka ny fomba fieritreretantsika ny ho avy dia mamolavola ireo hetsika ataontsika amin'izao fotoana izao koa. Noho izany, raha mitazona ny fomba fijery ratsy momba ny ho avy isika dia tena tsy azo inoana ny manova ny lalantsika ankehitriny. Etsy ankilany, raha mitahiry sary miabo amin'ny ho avy tiany isika dia azo inoana kokoa fa handray andraikitra tsara amin'izao fotoana izao.
Ity dia zavatra iray izay nodinihin'ny mpahay tantara holandey sy Fred fut Polist (izay nadika sy noresahin'i Boulding, 2000). Hitany fa nandritra ny tantara dia natanjaka ireo fiarahamonina nitana sary tsara amin'ny ho avy handray andraikitra ara-tsosialy, ary ireo fiarahamonina tsy nanana sary tsara ireo dia latsaka anaty fahalovana ara-tsosialy.
Anisan'ny fanamby ny tsy fanaovan'ny fanabeazana antsika fahaizana ampy tsara amin'ny mpianatra amin'ny fomba sy fomba fisainana ny ho avy. Ny fieritreretana sy ny fananganana ny ho avy tiany dia mitaky fisainana, fahaiza-mamorona ary filalaovana. Mazava ho azy fa tsy tokony hahagaga raha maro amin'ireo mpikirakira ara-paminaniana faran'izay mpaminany no nofanina tamin'ny zavakanto famoronana. Izay fandaharam-pianarana na taranja am-pianarana mety handray endrika fisainana toy izany - zava-kanto, mozika, mahaolona - dia teo amin'ny sisin'ny famolavolana fanabeazana neoliberal nandritra ny am-polony taona maro. Ny fandaharam-pianarana toy izany dia tsy heverina ho zava-dehibe amin'ny fandraisan'anjaran'ireo mpianatra amin'ny lamina ara-toekarena ankehitriny. Angamba maro amintsika eto no efa nolazaina tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fiainantsika hoe: “Tsy mahazo asa ianao amin'izany mari-pahaizana izany.”
Ny fisokafan'ny tenantsika hieritreritra momba ny ho avy tiana dia mitaky, farafaharatsiny farafaharatsiny, ny fialantsika amin'ny eritreritra mandanjalanja ary ny fomba fisainantsika, ny fahalalana ary ny maha-izy azy. Betsaka ny fomba ahafahantsika manao an'io.
Elise Boulding (1988) dia nanantitrantitra ny filalaovana saina sy ny sary ho fitaovana hamoahana ny eritreritra. Mikasika ny lalao ara-tsaina dia notanisainy i Huizinga izay nanamarika fa “ny lalao dia mampahafantatra antsika fa tsy olona mahay mandanjalanja isika, satria milalao ary mahalala koa fa milalao - ary misafidy ny hilalao, mahafantatra fa tsy mitombina izany” (p. 103 ). Milalao ny olon-dehibe, fa amin'ny fomba tena mahazatra. Very ny fahalalahana nilalao tamin'ny tanora. Ka ny famerenana ny lalao amin'ny olon-dehibe dia ilaina amin'ny famerenantsika ny eritreritra ara-tsosialy.
Ny sary dia fitaovana iray hafa hamoahana ny sary an-tsaina. Raha hanonona ny mpiara-miasa amiko Mary Lee Morrison (2012):
“Sary daholo isika. Ao anatintsika lalina dia mitondra fahatsapana, sombina, sary, fahitana, feo, fofona, fahatsapana ary finoana isika. Indraindray ireo dia maneho fisehoan-javatra tena misy na noforonina tamin'ny lasa. Indraindray izy ireo dia mety maneho ny fanantenantsika sy ny nofintsika amin'ny ho avy. Indraindray ireo sary ireo dia tonga amintsika amin'ny nofy rehefa matory isika. Indraindray amin'ny nofinofy. Mampatahotra indraindray ireo sary ireo. Indraindray tsia. ”
Misy fomba maro samihafa amin'ny fakana sary, ao anatin'izany ny nofinofy mitsambikina (karazana lalao), ny nofinofy fialokalofana, ny fanavaozana ny nofinofy matory, ary amin'ny fanabeazana ho avy dia mampiasa sary mifantoka betsaka amin'ny ho avy manokana sy ara-tsosialy (Boulding, 1988). Ity endrika farany ity dia misarika ny hafa rehetra amin'ny fomba mifantoka sy fanahy iniana. Io no fototry ny maodelin'ny atrikasa ho avy tiany noforonin'i Warren Zeigler, Fred Polak ary Elise Boulding izay nivadika ho atrikasa izay notanterahin'i Elise matetika tamin'ny taona 1980 momba ny “Imaging a World without Nuclear Weapons.”
Mpampianatra momba ny fandriam-pahalemana maro, indrindra ireo izay miasa amin'ny fampianarana ambony, no mety hahatsapa ho tsy mahazo aina amin'ny fampiasana ny sasany amin'ireo fomba famoronana sy milalao amin'ny fampianarana. Takatra fa izany no izy. Ny ankamaroantsika dia nampianarina hino fa tsy izany no mitranga amin'ny fianarana amin'ny fampianarana ambony. Mampianatra ihany koa izahay any amin'ny andrim-pianarana izay manamarina sakany voafetra amin'ny fahalalana sy ny maha-izy azy. Mety hanamavo antsika ny mpiara-mianatra aminay, na, toy ny mahazatra ahy matetika, dia gaga ny masonay mpiara-miasa aminay rehefa mandalo ny efitrano fianaranay izy ireo ary mahita ireo mpianatra manao teatra amin'ireo hetsika voageja, mihomehy, manao sokitra ny vatany fanoharana momba ny famoretana, na lalao. Na dia mety manakiana ny filaminan'ny asantsika aza ny fanekentsika ny mpiara-mianatra amintsika dia tsy tokony avelantsika hanakana azy io hitarika fampianarana manan-danja sy misy dikany izay manome ny mpianatra fahalalana, fahaiza-manao ary famoronana hamoronana ho avy milamina kokoa.
Na dia manakiana ny famoahana ny sary an-tsaina aza ny lalao sy ny sary dia mila apetraka ihany koa ireo fomba fahalalana sy maha-izy antsika ao anatin'ny rafitra pedagojika misimisy kokoa momba ny fanovana ara-tsosialy. Taona vitsy lasa izay, Betty Reardon (2013) dia nanonona fomba telo fanaovana famotopotorana taratra mifanaraka amin'ny pedagogy fanaovana politika. Ireo fomba 3 ireo - mitsikera / mamakafaka, môraly / etika, ary misaintsaina / ruminative - dia afaka miasa miaraka ho toy ny scaffold ho an'ny praxis fianarana izay azo ampiharina amin'ny fianarana ofisialy sy tsy ofisialy ho an'ny fandriam-pahalemana sy fanovana ara-tsosialy.
Taratry ny fitsikerana / fanadihadiana dia fomba iray mitovy amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana izay notantaraiko tery aloha. Izy io dia manohana ny fampandrosoana ny fahatsiarovan-tena kritika izay ilaina amin'ny fanakorontanana ireo fiheverana an'izao tontolo izao ilaina amin'ny fanovana manokana sy ny fahombiazan'ny politika. Taratra moraly sy etika manasa fandinihana valinteny isan-karazany amin'ny olana ara-tsosialy nipoitra nandritra ny fandinihana ny fitsikerana / fanadihadiana. Manasa ny mpianatra izy handinika valiny etika / fitondran-tena mety. Contemplative / ruminative Ny fisaintsainana dia manome orientation ho avy, manasa ny mpianatra haminavina ny ho avy tiany miorina amin'ny tontolo etika / fitondran-tenany.
Nampifanarahiko tamin'ireo fomba fitadiavana taratra ireo ho toy ny rafitra pedagojika amin'ny fampianarako ofisialy sy tsy ofisialy (Jenkins, 2019). Mitovy ny filaharako, fa misy refy ampiana. Manomboka amin'ny fisaintsainana mitsikera / famakafakana aho hanohanana ny mpianatra manontany an'izao tontolo izao. Avy eo dia nifindra tamin'ny fisaintsainana etika aho, nanasa ny mpianatra hanombantombana raha mifanaraka amin'ny soatoavina hajain'izy ireo sy ny fari-pitsipi-pitondran-tena sy etika misy azy izao tontolo izao. Fotoana mety tsara hitondrana ny rafitra etika efa misy. Tena mamporisika ny fampiasana ny Manifesto ho an'ny mahazatra vaovao noho ny fisian'io fotoana io. Ho an'ireo liana, ny Global Campaign dia efa namolavola sy namoaka fanontaniana vitsivitsy momba ny fampiasana azy (jereo: "Famerenana ny fombam-pianarantsika amin'ny fandehanana amin'ny lalana vaovao"). Azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny mampiasa lamina normatif hafa toy ny Earth Charter, ny Universal Declaration of Human Rights, ary ny United Nations Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace izay nametraka andiana “soatoavina, fihetsika, fomban-drazana ary fomba fitondran-tena. sy ny fomba fiainana ”izay azo ampiasaina ho fototry ny filaminana milamina izao tontolo izao. Raha heverin'ny mpianatra fa tsy mifanaraka amin'ity rafitra ity sy ireo soatoavin'izy ireo izao tontolo izao, dia omeko fotoana itadiavana fandinihana sy fandinihan-tena izay ampiasako matetika amin'ny alàlan'ny fizotran'ny famoronana izay manome vina ny fahitana izay tiana sy izay mety hisy. Ary farany, mba hanohanana ny fanomezan-danja ny mpianatra handray andraikitra amin'ireo fahitana ireo dia mamporisika azy ireo ihany koa aho hamolavola tolo-kevitra ho avy, hanao tomban'ezaka amin'ny namana, ary hametraka drafitra hametrahana paikady pedagogika sy politika hanatanterahana ny vina.
Ny fanantenako sy ny tanjoko hizara hevitra azo ampiharina sy ara-pedagojika avy amin'ny zavatra niainako manokana dia ny handrisika ny hisaintsaina ny fanantenana sy ny fampanantenan'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana ho fitaovana hananganana ho avy ara-drariny sy milamina. Ny ahiako dia ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana, tsy misy orientation futures, mijanona kely fotsiny amin'ny hetsika amin'ny eritreritra mitsikera sy mitombina. Amin'ny maha mpanabe fandriam-pahalemana antsika dia asiana fanamby pedagojika marobe isika amin'ny fanabeazana amin'ny fametrahana kolontsaina fandriam-pahalemana. Ny fananana fahatakarana mitsikera izao tontolo izao dia tsy midika kely raha tsy mahita fomba hikolokoloana ara-pedagojika ny faharesen-dahatra anatiny izay fototry ny endrika hetsika politika ivelany tsy misy herisetra ilaina amin'ny fananganana sy fananganana ho avy tiana kokoa.
Satria efa hanomboka ny taom-pianarana vaovao, farafaharatsiny ho antsika any amin'ny hemisphere avaratra, mamporisika ny mpanabe aho handinika ny fampidirana ny sasany amin'ireo fanontaniana ilaina amin'ny eritreritra, ny fahitana, ny fandrafetana ary ny fametrahana ny "ara-dalàna vaovao" a post COVID -19 izao tontolo izao ao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo.
Te-hamarana amin'ny teny nalaina avy amin'ny namako sy mpanolotsaina Betty Reardon (1988) aho, izay mampahatsiahy antsika fa "raha te hampianatra ho an'ny fandriam-pahalemana isika, dia samy mila manana ny heviny momba ny tontolo niova izay ampianarintsika ny mpampianatra sy ny mpianatra. . ” Ho an'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia ilaina izao ny ho avy.
Tony Jenkins PhD manana traikefa 19+ taona mitarika sy mamolavola programa sy tetikasa fanabeazana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana sy fitarihana amin'ny fampandrosoana iraisam-pirenena ny fandriam-pahalemana sy ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana. Tony dia Mpampianatra amin'ny programa momba ny fandalinana ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Oniversiten'i Georgetown. Hatramin'ny 2001 dia talen'ny fitantanana ny Ivontoerana Iraisam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana (IIPE) ary hatramin'ny 2007 ho mpandrindra ny Global Campaign for Peace Education (GCPE). Ny fikarohana nataon'i Tony dia mifantoka amin'ny fandinihana ny fiantraikany sy ny fahombiazan'ny fomba fanabeazana ny fandriam-pahalemana sy ny pedagogies amin'ny fikolokoloana ny fanovana sy fanovana manokana, sosialy ary politika. Izy koa dia liana amin'ny famolavolana fanabeazana ofisialy sy tsy ofisialy miaraka amin'ny fahalianana manokana amin'ny fiofanana ho an'ny mpampianatra, ny fomba hafa hanampiana ny filaminana manerantany, ny famolavolana ny rafitra, ny tsy fitaovam-piadiana ary ny miralenta.
Fanovozan-kevitra sy loharano
Boulding, E. (1988). Fananganana kolontsaina sivika manerantany: Fanabeazana ho an'ny tontolo mifampiankina. Teacher College Press.
Boulding, E. (2000). Kolontsain'ny fandriam-pahalemana: Ny lafiny miafina amin'ny tantara. Syracuse University Press.
Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. (2020). Manifesto ho an'ny fanao mahazatra vaovao. Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana. https://www.peace-ed-campaign.org/manifesto-for-a-new-normality/
Fifandraisana Corona: Fianarana ho an'ny tontolo nohavaozina. (2020). Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana. https://www.peace-ed-campaign.org/tag/corona-connections/
Kaomisiona momba ny satan'ny tany. (2000). Ny satan'ny tany. https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2020/03/echarter_english.pdf?x23441
Jenkins, T. (2019). Reardon's edu-learner praxis: Fampianarana ho an'ny fahombiazan'ny politika sy ny fanovana ara-tsosialy. Ao amin'ny Snauwaert, D. (Ed.), Mikaroka ny fomba fijerin'i Betty A. Reardon momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana: mijery, miandrandra. Springer. Nalaina avy amin'ny: https://www.academia.edu/39988174/Reardons_Edu_learner_Praxis_Educating_for_Political_Efficacy_and_Social_Transformation
Kester, K. (2020). Fahamarinana, posttruth ary COVID-19: valinteny fanabeazana sasany. Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana. https://www.peace-ed-campaign.org/truth-posttruth-and-covid-19-some-educational-responses/
Morrison. ML (2013). Inona no hitranga amin'ny ho avy: fironana amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana. Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana. https://www.peace-ed-campaign.org/what-the-future-holds-trends-in-peace-education/
Morrison, ML (2012). Famoronana ho avy: fakana sary tontolo tsy misy fôsily. Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana. https://www.peace-ed-campaign.org/futures-invention-imaging-a-fossil-free-world/
Reardon, B. (1988). Fampianarana ho an'ny andraikitra manerantany: fandaharam-pianarana noforonin'ny mpampianatra ho an'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana, K-12. Teacher College Press.
Reardon, B. (2009). Tongasoa eto utopia: fisaintsainana ny zava-misy sy ny mety. Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana. https://www.peace-ed-campaign.org/welcome-to-utopia-reflections-on-realities-and-possibilities/
Reardon, B. (2013). Dimension taratra sy foto-kevitra momba ny fanabeazana fandriam-pahalemana feno / mitsikera. Ao amin'ny Trifonas, PP & Wright, B. (Eds.), Fampianarana fandriam-pahalemana mitsikera: fifanakalozan-kevitra sarotra. Springer. Nalaina avy amin'ny: https://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2020/05/Meditating-the-Barricades.pdf
Reardon, B. (2020). Famerenana ny pedagogy antsika amin'ny fandehanana amin'ny làlana mankany amin'ny fanao mahazatra vaovao. Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana. https://www.peace-ed-campaign.org/reviewing-our-pedagogy/
Fivoriamben'ny Firenena Mikambana. (1948). Fanambarana ankapobeny momba ny zon'olombelona (217 [III] A). Nalaina avy amin'ny: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
Fivoriamben'ny Firenena Mikambana. (1999). Fanambarana sy fandaharan'asa momba ny kolontsain'ny fandriampahalemana: fanapahan-kevitra / noraisin'ny fivoriambe (A / RES / 53/243). Nalaina avy amin'ny: https://digitallibrary.un.org/record/285677/files/A_RES_53_243-EN.pdf
# fanabeazana ho avy
Hiroshima fampirantiana niomerika “Hetsi-panoherana malaza any Japan taorian'ny ady: ny zava-kanto anti-ady an'i Shikoku Gorō”
Antso manerantany ho an'ny governemanta niokleary sivy (sonia ny fanangonan-tsonia!)
Ny tsimok'aretina "nasionalisme krizy"
Aprily 1, 2020 Toetoetra, Opinion 0
Werner Wintersteiner dia nanamafy fa ny krizy Corona dia nanambara fa ny fanatontoloana dia nitondra fifampiankinan-doha tsy misy firaisan-kina. Miparitaka erak'izao tontolo izao ny viriosy, ary mitaky ezaka lehibe manerantany ny fanoherana azy, saingy mihetsika ny fijerin'ny fanjakana amin'ny fahitana ny tionelina nasionaly. Mifanohitra amin'izany, ny fomba fijery ny zom-pirenena manerantany dia mety amin'ny krizy manerantany. [tohizo ny famakiana…]
Ny areti-mandringana dia nanala tanteraka ny zava-misy fa ireo eo amin'ny farany ambany amin'ny tohatra ara-tsosialy sy ara-toekarena dia miaina ao anaty tsy fahampiana ara-dalàna sy tsy maharitra. Fanentanana eo noho eo ny fanabeazana ny fandriampahalemana. [tohizo ny famakiana…]
Fitaovam-piadiana niokleary sy COVID-19
Jolay 8, 2020 fandaharam-pianarana 0
Ny areti-mandringana COVID-19 dia nametraka fanontaniana ara-bola, ara-moraly ary etika momba ny fandaniana amin'ny fitaovam-piadiana niokleary raha oharina amin'ny fandaniana amin'ny serivisy ara-pahasalamana. Peace Education Scotland dia namolavola taratasy fampahalalana ho an'ny mpampianatra sy mpanabe an-trano izay mikendry ny hamintina ny sasany amin'ireo olana ireo. [tohizo ny famakiana…]